अन्तर्वार्ता – Page 56 – Etajakhabar
राष्ट्रपतिकी आमा वृद्धाश्रममा यस्तो अवस्थामा भेट्दा जे देखियो …! पोखिन् यस्तो पिडा (भिडियोसहित)
काठमाडौ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित आश्रममा बस्दै आउनु भएको छ । उनकी आमा दशकभन्दा बढी समयदेखि उक्त आश्रममा बस्दै आएकी छन् । उँहा आश्रमकी संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । आश्रममा बसेर अरु वृद्धाहरुको सेवामा समेत सक्रिय उनी चतराधाम क्षेत्रमा हुने धार्मिक–आध्यात्मिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गर्नु भएको छ । ७७ वर्षीया पाण्डेका पति रामबहादुरको ३२ वर्षको उमेरमा मृत...
दिल्लीमा पुगेका नायक राजेश हमाललाई राजदुतको प्रस्ताव : राजेशले भने “राजदूतको प्रस्ताव आयो भने हुन्न भन्न सक्दिनँ”
नेपाली सिने क्षेत्रका सुपरस्टार राजेश हमाल र कालकार दिनेश डिसि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण टोली सदस्य बनेर यसपटक नयाँ दिल्ली आए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा कलाकारलाई समावेश गरिएको यो संभवतः पहिलो पटक हो। दिल्लीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै हमाल र डिसिले भारतीय कलाकारको एउटा टोलीसँग भेटघाट गरेर फिल्म क्षेत्रमा हुनसक्ने साझेदारीबारे छलफल गरे। सुपरस्टार हमाल अधिकांश समय नेपाली प्रतिनिधिमण्ड...
यी सुन्दरी पाइलट पेमा जो ६ वर्षदेखि बुद्ध एयरको जहाज उडान गर्दै आएकी छन् !
केटी मान्छे भएर जहाज उडाउन डर लाग्दैन?’ पेमा लामालाई धेरैको प्रश्न यही हुन्छ। विगत ६ वर्षदेखि बुद्ध एयरको जहाज उडान गर्दै आएकी पेमा लामा यस्तो प्रश्न सोध्नेहरुलाई उत्तर दिन्छिन्, ‘डर होइन, जहाज उडाउन पाउँदा गर्वको महसुस हुन्छ।’ हो, महिलाले साहसिक काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता भएका व्यक्तिहरुले महिलाहरुले पाइलटको पेशा अपनाउनुलाई अझै पनि आश्चर्यको रुपमा लिने गर्छन्। तर पेमा लामाको साहसले यो ...
राजेश हमालले भारतमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भने “ओली राजनेता, एमाले मलाई मनपर्छ” अब नेपालीले भारतीय चलचित्र हेर्दैनन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं - राजेश हमाल नेपालका एक चर्चित अभिनेता हुन् । उनलाई नेपाली चलचित्र उद्योगलाई व्यवसायिकतामा ल्याउन प्रमुख भूमिका रहेको व्यक्तिका रूपमा पनि लिइन्छ । राजेश हमालले नेपाली चलचित्रमा २ दशक भन्दा बढी अभिनय गरिसकेका छन् । उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा गरेको योगदानको लागि धेरै पुरस्कारहरूले सम्मानित भइसकेका छन् जसमा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार (१९८८-२०१४) रहेको छ । उनलाई यसै कारण महानायक भन्ने ग...
काठमाडौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा अभिनेता राजेश हमाल पनि सँगै जाने भएका छन् । गत शुक्रबार भारत जना लागेका ओलीले कलाकारलाई पनि सहभागी गराएका हुन् । ओलीले आफनो भारत भ्रमणका क्रममा भ्रमण दलका सदस्यमा कलाकारहरुलाई पनि सहभागी बनाउने बताएका थिए । उनले आफूले भारतमा रहँदा भारतीय कलाकारसँग पनि छलफल गर्ने भन्दै कलाकारलाई पनि विशेष महत्व दिएर भ्रमणमा सहभागी गराउने बताएका थिए । भारती...
मलाई कसरी षडयन्त्रपूर्वक हटाइयो, त्यो इतिहासमा लेखिनेछ : पूर्व प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुली (भिडियो)
काठमाडौं - पूर्व प्रधानन्याधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले आफुलाई पदबाट जर्बजस्ती हटाइएको बताएका छन् । पराजुलीले आफुले राम्रो काम गर्दागर्दै विभिन्न षडयन्त्र गरेर आफुलाई पदबाट हटाउन केही दुष्टहरुको सञ्चालबाट कुकृत्य भएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । पराजुलीले आफुलाई जसरी षडयन्त्र गरियो त्यो इतिहासले खोज्ने पनि बताएका छन् । पराजुलीले न्याय प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउन केही तत्वहरु सक्रिय रहेको र तिनले न्य...
कुनै दिन राजेश दाईको सुटिङबाट स्पोट ब्वायले उता हट भनेर मलाई हटाउने गर्थे तर आज राजेश दाईसंग यसरि संगै बस्दा मलाई नसुहाएको महसुस गरेको छु भन्दै बावुक बने केदार घिमिरे (भिडियो)
काठमाडौं । हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘मेरी बास्सै’ मा टिपिकल गाउँलेको भूमिका निर्वाह गरेर चर्चामा आएका केदार घिमिरे ‘माग्नेबुढा’ अहिले गाउँकै जिबनशैलिसंग साक्षात्कार गर्दैछन् । यतिबेला नेपाली सिनेक्षेत्रमा कलाकारहरुको प्रेम सम्बन्धपछि सबैभन्दा चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ उनीहरुको पारिश्रृमिक । यतिबेला कलाकारहरुबीच कसले बढि पारिश्रृमिक लिने भन्नेबारेमा तँछाड र मछाडको अवस्था रहेको छ । हालसम्म सबैभन्दा ...
‘केपी ओली पहिले बाघ बनेर गर्जिए, अहिले मुसो बनेर दिल्ली छिर्दैछन्’ नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्न्यात (भिडियो)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजकीय भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । चैत २३ देखि २५ हुने उक्त भ्रमणको विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको हतारो किन ? भनेर धेरैले सोधे पनि । भ्रमणको लागि यो उपयुक्त समय हो त ? नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल तथा नागरिक समाजका अगुवा डा. प्रेमसिंह बस्न्यातसँग हामीले यी नै विषयमा बहस गरेका छौँ । नेपालआजका लागि लोक...
-19931 second ago
-18894 second ago
-17836 second ago
-16638 second ago
-15139 second ago
-14354 second ago
-11998 second ago